Ogaden News Agency (ONA) – Shir abaabul oo Soomaali weyn loogu qabtay magaalada Durban+Sawiro
Shir abaabul oo Soomaali weyn loogu qabtay magaalada Durban+Sawiro
Posted by Daljir	/ May 30, 2014
Magaalada Durban ee wadanka Koonfur Afrika ayaa shir weyn oo aan loo kala hadhin loogu qabtay Somaliweynta dagan magaaladaas iyo wafti kamid ah maamulka guud ee jaaliyada Ogadenya ee wadanka K/Afrika oo uu hogaaminayay gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Maxamed Daahir.
Shirkan ayaa waxaa qabtay faraca Hilaac oo hoostaga jaaliyada Ogadenya ee wadanka Koonfur Afrika,waxaana shirka kusoo dhaweeyey wufuuda martidada ahayd iyo shacabweynaha Somali weyn ee magalaadasi dagan gudoomiyaha faraca Hillaac Mudane Rashiid.
Gudoomiyaha JOKA Mudane Maxamed Daahir ayaa warbixin waafi ah kasoo jeediyay shirka oo isugu jirta Taariikhda umada soomaaliyeed iyo halgalka uu shacabka ogaadeeniya kudoonayo sharaftiisa iyo karaamadiisa.
shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan umada soomaaliyeed ee kudhaqan magaalada Durban.
Abwaan Kharad Colaad ayaa madasha kusoo bandhigay Gabayo aad u qiiro galiyay kasoo qayb galayaashii wuxuuna diirada kusaaray mustaqbalka umada soomaaliyeed isagoo si wanaagsan u faah faahiyay
shirkan oo ahaa mid si wayn loosoo abaabulay ayaa laysku raacay in halganka lagarab istaago waxayna kasoo qaybgalayaashu balan qaadeen in ay si buuxda utaageerayaan Halganka soomaaliyeed ee lagu xoraynayo dadka iyo dalka s/Ogadenya.